कोरोना संक्रमित युवतीसँगै आएका १ सय ५८ जनाको पहिचान खुल्यो ! सबैलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरी क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह – Sagarmatha Online News Portal
कोरोना संक्रमित युवतीसँगै आएका १ सय ५८ जनाको पहिचान खुल्यो ! सबैलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरी क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह
काठमाडौं । गत चैत ४ गते कतार एयरवेजको ३ वटा जहाजबाट काठमाडौं आएका १ सय ५८ जना यात्रुको पहिचान खुलेको छ ।
सोहि दिन कतार एयरवेजकै दोस्रो Flight No- QR 650 बाट आएकी एक जना युवतीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि ती यात्रुहरुको खोजी गरिएको हो । कतिपय यात्रुहरु त प्रहरीको सम्पर्कमा आएर स्वास्थ्य परीक्षण गरी होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । भने, कतिपय अस्पताल गई डाक्टरको प्रत्यक्ष निगरानीमा बसिरहेका छन् ।
जहाजमा आएका १ सय ५८ मध्ये ४६ जिल्लाको यात्रुहरुको विवरण भेटिएको छ । जसमा २७ जनाको ठेगाना खुलेको छैन । जहाजमा १ सय ३३ जना पुरुष, २० जना महिला र अन्य ५ जनाको विवरण पहिचान भएको हो । पहिचान भएका सबैको खोजी गरी तत्काल नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गरी क्वारेन्टाइनमा बस्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा बढि महोत्तरी र धनुषाका नागरिक छन् । यी दुई जिल्लाको ११/११ जना छन् । त्यसैगरी अन्य जिल्लाहरुमा सुनसरी ४, बाग्लुङ ४, ताप्लेजुङ २, काठमाडौं ८, सर्लाही ४, मोरङ २, सिन्धुपाल्चोक ३, झापा ५, स्याङजा ६, दोलखा २, बर्दिया १, पाँचथर ३, पाल्पा १, सप्तरी २, बाँके ४, कास्की २, दैलेख जिल्लाका १ जना रहेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी सोलुखुम्बु ४, रसुवा २, ओखलढुंगा २, चितवन ६, उदयपुर १, धनकुटा १, खोटाङ २, तनहुँ १, नवलपरासी २, काभ्रेपलाञ्चोक ५, कपिलवस्तु १, अर्घाखाँची १, ललितपुर ४, कञ्चनपुर १, गोर्खा १, रुपन्देही ३, सिरहा ४, धादिङ ३, ईलाम १, दाङ २, मकवानपुर १, गुल्मी १, रौतहट १, बारा १, रसुवा १ र भोजपुरका १ जना गरी १ सय २९ जना सोहि दिन काठमाडौं आएका थिए ।
सोहि जहाजमा २ जना भने भारतीय नागरिक भनेर उल्लेख गरिएको छ । भने, २७ जनाको ठेगाना उल्लेख गरिएको छैन । १ सय ५८ जनाको नाम खुलेसँगै सम्बन्धित जिल्लाका सबै सरकारी अधिकारीलाई जानकारी दिइएको पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले बताए ।
चैत ४ गते कतार एयरवेजको ३ वटा जहाजमा ४ सय ६४ यात्रु आएको रेकर्ड नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छ । मार्च १७ तारिख अर्थात चैत ४ गतेका दिन कतारबाट बिहान ३ बजेर ५ मिनेटमा उडेको जहाज बिहान १० बजेर ५ मिनेट काठमाडौं आइपुगेको थियो ।
मध्यान्ह १२ बजे दोहाबाट उडेको जहाज सोही दिन बेलुका ७ बजेर ३५ मिनेटमा काठमाडौं आइपुगेको थियो । यस्तै बेलुका ४ बजेर ५५ मा दोहोबाट उडेको जहाज राति १२ः३० बजे काठमाडौं आइपुगेको रेकर्ड प्राधिकरणसँग छ ।
प्राधिकरणका उच्च अधिकारीका अनुसार ५ जनवरीदेखि २८ मार्चसम्म राखिएको उडान तालिकामा कतार एयरवेजबाट ६ मोडलका जहाजले काठमाडौंमा यात्रु ओरालेका छन् । ए ३३०-३००, ए ३३०-२००, ए ३२१-२००, ए ३२०-२००,ए ३१९-१३३ र बी ७७७-२०० मोडलका जहाजमध्ये त्यो दिन ३ वटा जहाज काठमाडौं आएका थिए ।
अधिकारीका अनुसार चैत ४ गते कतार एयरवेका ३ जहाजमध्ये पहिलो जहाज क्यूआरर ६५२ जहाजमा २०५ यात्रु थिए । त्यस्तै, क्यूआर ६५० जहाजमा १०६ जना यात्रु थिए भने क्यूआर ६४४ जहाजमा १५३ यात्रु काठमाडौं आएका थिए ।
[पहिचान खुलेका १ सय ५८ जनाकाे नाम भने गोपनीयताको हक अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको छैन । यदि तपाई आफ्नो जिल्लाको को-को थिए भन्ने जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेण्टमा लेखेर पठाउनुस । हामी तपाईको फेसबुक म्यासेञ्जरमा तपाईको जिल्लाको को व्यक्ति हुन् पठाउने छौं । तपाईको जिल्लाको व्यक्ति थाहा पाइसकेपछि सम्बन्धित निकायमा गएर सम्पर्क गर्न लगाउनुस । कोरोनाबाट बच्न तपाई हाम्रो सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ । – सम्पादक]
यस कारण कोभिड-१९ लाई डब्लुएचओले महामारी घोषणा गर्यो !
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले विश्व व्यापी तीव्र रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)लाई महामारीको संज्ञा दिएको छ ।
डब्लुएचओको रिर्पोट अनुसार चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोन भाइरस १ लाख व्यक्तिसम्म पुग्न ६७ दिन लागेको थियो । त्यसपछि ११ दिनमा १ लाखमा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण थपिएको थियो । अथवा १ लाखमा कोरोना भाइरस सर्न ११ दिन लाग्यो । २ लाख कोरोना संक्रमित बिरामीबाट ३ लाख बिरामी पुग्न मात्र ४ दिन लागेको थियो । त्यसैले डब्लुएचओले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)लाई महामारीको संज्ञा दिएको बताएको छ ।
चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना भाईरस कोभिड-१९ले यो समाचार तयार पार्दासम्म २२ हजार १९ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । ४ लाख ८६ हजार ५ सय ९२ जनालाई कोरोना संक्रमित भएको छ, भने १ लाख १७ हजार ४ सय ४६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
कोरोनाबाट सबैभन्दा बढि मानिस ईटालीका ७ हजार ५ सय ३ जनाको मृत्यु भएको छ । दोस्रोमा स्पेनका ४ हजार ८९ जना र तेस्रोमा चीनका ३ हजार २ सय ८७ जनाको मृत्यु भएको छ । यो भाइरस अहिलेसम्म १ सय ९९ देशमा फैलिसकेको छ ।
Published On: १३ चैत्र २०७६, बिहीबार